मलेसियामा आफ्नै दाजुभाई लुट्ने नेपाली गिरोह पक्राउ, प्रतिव्यक्ति कति पैसा उठाउँथे ? - Dainik Nepal
मलेसियामा आफ्नै दाजुभाई लुट्ने नेपाली गिरोह पक्राउ, प्रतिव्यक्ति कति पैसा उठाउँथे ?
दैनिक नेपाल २०७३ फागुन ६ गते १७:५८
काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाली भएर नेपालीहरुलाई नै जबरजस्ती पैसा असुली र डकैतीमा संलग्न नेपालीहरुको एउटा गिरोह मलेसियामा पक्राउ परेको छ । मलेसिया प्रहरीले पक्राउ गरेका ११ जनामध्ये दुई जना महिला पनि सहभागी छन् ।
उनीहरु त्यहाँ संकलित रुपैयाँ लिनका लागि पुगेका थिए । प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरीले छापा हानेको थियो । ‘पेनाङ योङ स्टार ग्याङ’ को नामले परिचित सक्रिय गिरोहले एक वर्ष देखि आफ्नै देशका नेपाली साथीहरुबाट रुकम उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुले मासिक प्रतिव्यक्रि २५ रिङ्गेटका दरले ‘सुरक्षा शुल्क’ असुल गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । गिरोहका व्यक्तिहरु थुप्रै अपराधिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको खुलेको बताए ।
उनीहरुले समूहको मानिसलाई पहिचान गर्नका लागि शरीरमा साझा टाटु पनि बनाएका थिए । प्रहरीले उनीहरुबाट खुकुरी, नेपाली झण्डा, व्वाँसोको टाउको भएको मुर्ति, सांगीतिक उपकरण लगायत बरामद गरेको छ । उनीहरुसंग यात्राको वैध कागजात पनि नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।